ခဈြဖို့ပဲသိတဲ့ နှလုံးသားဟာ သိပျကို ပူလောငျရတတျတယျ …. – Shinyoon
ခဈြခွငျးမတ်ေတာ မခဈြတတျတဲ့လူအတှကျတော့ ပူလောငျရတယျ …
ခဈြတယျ တကယျနှဈနှဈကာကာခဈြပမေယျ့လဲ ခဈြနညျးမမှနျတဲ့အခါ… ခဈြနရေငျးကနေ နာကငျြရတယျ ပွီးတော့ ပူလောငျရတယျ … ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ ကိုယျက ခဈြဖို့ပဲသိခဲ့တာလေ အနောကျမှာ ဘယျလိုဆကျဖွဈလာမလဲဆိုတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို မတှေးခဲ့ မထငျခဲ့ဘူး
ကိုယျက သူ့ကိုခဈြတာပဲလေ သူမချေါလဲကိုယျချေါလိုကျမှာပေါ့ဆိုပွီး ကိုယျ့ဘကျက မာနမထားလိုကျလို့ရတယျ ဒါပမေယျ့ တဈဖကျကလဲ အဲ့လိုတှေးတတျဦးမှလေ … အဲ့လိုမှမတှေးပဲ ငါချေါစရာမလိုပါဘူး သူပဲ ချေါလာလိမျ့မယျဆိုရငျ အဲ့ဒီအခဈြရေးဟာ ကိုယျဘကျက စချေါမှပဲ အသကျတှဝေငျလာသလို ဖွဈသှားလိမျ့မယျ
ကိုယျက သိပျခဈြလှနျးလို့ဂရုစိုကျခဲ့ပမေယျ့ သူက အဲ့ဒီဂရုစိုကျမှုတှမှော အကငျြ့တှပေါသှားတတျတယျ နရောတကာ ကိုယျ့ဘကျက လြှော့လှနျးတော့ ကိုယျနဲနဲလေးတငျးလိုကျတာနဲ့ ပကျြသှားမယျ့ ဆကျဆံရေးအဖွဈ ပွောငျးသှားတတျတယျ အရငျကလို ဖာသိဖာသာ သာနနေဖွေဈခဲ့ရငျ ကိုယျခုလို ပဈထားခံရမှာမဟုတျဘူးဆိုတဲ့ နောငျတတှနေဲ့ပေါ့
ခဈြပါ…ဒါပမေယျ့ ခဈြတတျဖို့လိုတယျ … ပိုပွီးခဈြမိသှားတဲ့အခါ နောကျဆုံးတှကေတြော့မှ ငါသာ အဲ့လောကျမခဈြပွခဲ့မိရငျဆိုပွီး အရငျအခြိနျတှကေို ပွနျရောကျခငျြနရေုံနဲ့ မရတော့ဘူးလေ … ခဈြဖို့ပဲသိတဲ့ နှလုံးသားဟာ သိပျကို ပူလောငျရတတျတယျ ….
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မချစ်တတ်တဲ့လူအတွက်တော့ ပူလောင်ရတယ် …
ချစ်တယ် တကယ်နှစ်နှစ်ကာကာချစ်ပေမယ့်လဲ ချစ်နည်းမမှန်တဲ့အခါ… ချစ်နေရင်းကနေ နာကျင်ရတယ် ပြီးတော့ ပူလောင်ရတယ် … ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကိုယ်က ချစ်ဖို့ပဲသိခဲ့တာလေ အနောက်မှာ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မတွေးခဲ့ မထင်ခဲ့ဘူး
ကိုယ်က သူ့ကိုချစ်တာပဲလေ သူမခေါ်လဲကိုယ်ခေါ်လိုက်မှာပေါ့ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘက်က မာနမထားလိုက်လို့ရတယ် ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်ကလဲ အဲ့လိုတွေးတတ်ဦးမှလေ … အဲ့လိုမှမတွေးပဲ ငါခေါ်စရာမလိုပါဘူး သူပဲ ခေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအချစ်ရေးဟာ ကိုယ်ဘက်က စခေါ်မှပဲ အသက်တွေဝင်လာသလို ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
ကိုယ်က သိပ်ချစ်လွန်းလို့ ဂရုစိုက်ခဲ့ပေမယ့် သူက အဲ့ဒီဂရုစိုက်မှုတွေမှာ အကျင့်တွေပါသွားတတ်တယ် နေရာတကာ ကိုယ့်ဘက်က လျှော့လွန်းတော့ ကိုယ်နဲနဲလေးတင်းလိုက်တာနဲ့ ပျက်သွားမယ့် ဆက်ဆံရေးအဖြစ် ပြောင်းသွားတတ်တယ် အရင်ကလို ဖာသိဖာသာ သာနေနေဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုယ်ခုလို ပစ်ထားခံရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ နောင်တတွေနဲ့ပေါ့
ချစ်ပါ…ဒါပေမယ့် ချစ်တတ်ဖို့လိုတယ် … ပိုပြီးချစ်မိသွားတဲ့အခါ နောက်ဆုံးတွေကျတော့မှ ငါသာ အဲ့လောက်မချစ်ပြခဲ့မိရင်ဆိုပြီး အရင်အချိန်တွေကို ပြန်ရောက်ချင်နေရုံနဲ့ မရတော့ဘူးလေ … ချစ်ဖို့ပဲသိတဲ့ နှလုံးသားဟာ သိပ်ကို ပူလောင်ရတတ်တယ် ….